निद्रा मा बोल्ने बनि छ ? यसरि हटाउनु होस् एसतो बानि - NpNepalNews
Home›स्वास्थ्य/जीबन शैली›निद्रा मा बोल्ने बनि छ ? यसरि हटाउनु होस् एसतो बानि
निद्रा मा बोल्ने बनि छ ? यसरि हटाउनु होस् एसतो बानि
महिला हरु ले येसरी गर्छन हस्तमैथुन तपाई ...
भारत ले नेपाली भुमि मा बनायो उसको ...
सर्पले डसे के गर्ने ? विषालु सर्पले टोकेको १५ मिनेटभित्रै देखिने लक्षण यी हुन् ( अरुको लागि सेयर गरौँ )
अनिदो हुने गरी रातभरी ननिदाउदा यस्ता समस्या भोग्नु पर्छ ! किन निन्द्रा लाई पुरा गर्ने ?
फलफूलका बोक्राले यसरी चम्किलो बनाउन सकिन्छ अनुहारलाई। अपनाउनुस यी सरल उपायहरु !!
ओठ जोडेर चुम्बन गर्दा धेरै रोग सर्ने
सुपारी खानुहुन्छ ? छोड्नुहोस नत्र क्यान्सर हुन्छ
यी चिजबस्तु खालीपेटमा भुलेर पनि नखानुहोस हैन भने बिष समान हुन्छ !
सनिवार् को दिन गर्नु हुदैन यस्ता काम , जसले तपाईलाई ठुलो हानि गर्छ
यसरी भयो पृथ्वीजयन्तीमा पुन बिदा दिने निर्णय !! हेर्नुहोस
दुई ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुक भारत र चीनलाई उछिन्दै नेपाल २२ औँ स्थानमा